अनशन र कार्यदल गठनको प्रभाव शेयर बजारमा, १२.४९ अंकले बढ्यो नेप्से | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण अनशन र कार्यदल गठनको प्रभाव शेयर बजारमा, १२.४९ अंकले बढ्यो नेप्से
on: December 10, 2018 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
अनशन र कार्यदल गठनको प्रभाव शेयर बजारमा, १२.४९ अंकले बढ्यो नेप्से
१.१०% बढ्यो नेप्से, कारोबार रकममा ९५.२२% वृद्धि
मङ्सिर २४, काठमाडौं (अस) । शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि लगानीकर्ताहरुको मनोबल घटेको थियो । जसका कारण लगानीकर्ताहरु अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजिनामा माग गर्दै आइतवारदेखि अनशन बसेका थिए । फलस्वरुप, अर्थमन्त्रालय, पूँजी बजार सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरुको शेयरबजार तर्फ ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
सोमवार अर्थमन्त्री खतिवडाले पूँजी बजारको समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेपछि नेप्से परिसूचकमा पनि केही प्रभाव परेको हो । आइतवारदेखि पूँजी बजार समस्या अध्ययन समितिबाट सुझाव सङ्कलन गर्न थालेको थियो । परिसूचक निरन्तर घट्न थालेदेखि नेप्से तथा धितोपत्र बोर्डले पनि बारम्बार लगानीकर्ताहरुलाई आस्वासन दिंदै आएको थियो ।
सोमवार नेप्से परिसूचक १ दशमलव १० प्रतिशत बढेको छ । पछिल्लो समय घटिरहेको बजार केहि दिनयता सुधारिन थालेको छ । कारोबार शुरु भएदेखि निरन्तर उकालो लागेको नेप्से परिसूचक अन्त्यमा १२ दशमलव ४९ अंकले बढेर १ हजार १ सय ४४ दशमलव १९ विन्दुमा पुगेको छ ।
यसदिन कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९५ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको छ । कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा रू. २१ करोड ३० लाख घटेको हो । यसदिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स १ दशमलव १६ प्रतिशत बढेर २ सय ४३ दशमलव ८१ विन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबारमा आएका १० समूहको परिसूचकमा ८ समूहको परिसूचक बढेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन समूह र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक घटेको छ ।
जीवन बीमा समूहको परिसूचक १ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेको छ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स जस्ता कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढेपछि यस समूहको परिसूचक १ दशमलव ९७ प्रतिशत बढेको हो । त्यस्तै, ‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ११ प्रतिशत घटेको छ ।
१५६ कम्पनीको कारोबार
यस दिन कारोबार भएका १ सय ६३ कम्पनीको कारोबारमा ११५ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने २८ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २० कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर मूल्य ७ दशमलव ७७ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. १ सय ११ पुगेको छ । त्यस्तै, महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाको शेयर मूल्य ६ दशमलव ६२ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. ४ सय ८० पुगेको छ ।
यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्युट्रल जोन अर्थात् ३९ दशमलव ६२ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सामान्य रहेको देखाउँछ । नेप्सेको एडी रेशियो ४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । यसले बजार बुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।